Rafitra vy, tetezana vy, rindrina firakotra vy - Honghua
Raiso ny santionanay izao!
Guangdong Honghua Construction Co., Ltd. (voalaza eto fa Honghua) dia sampana fananganana an'i Guangdong Huayu Steel Structure Co., Ltd. Huayu dia toby fanodinana maivana sy vy mavesatra izay mahatratra 0,15 tapitrisa metatra toradroa. Ny fahaizan'ny famokarana isan-taona an'ny orinasa dia mety hahatratra 0,15 tapitrisa taonina. Ny orinasa dia manana ny mari-pahaizana ho an'ny orinasa mpanao vy firafitra voalohany ary izy ireo no toby famokarana manan-danja ao Shina atsimo. Ny orinasa dia mifantoka amin'ny fikarohana teknolojia fanodinana karazana fikarohana vy sy fampandrosoana teknolojia fanodinana vy ary orinasa mitarika amin'ity orinasa ity. Amin'ny maha sampana fananganana zanaky ny vondrona azy, Honghua dia manana ny mari-pahaizana momba ny Contractor Professional Structure Professional kilasy voalohany, ny famolavolana Structure Steel kilasy faharoa, ny Curtain Wall Professional Contractor, ny volavola voalohany momba ny volavola Projettor Professional, ny tetikasa fiarovana ny tontolo iainana kilasy voalohany Fifanarahana, Fifanekena Tetik'asa fototra kilasy voalohany, Fandraisana an-trano sy fanamboarana jeneraly faharoa, mpiantoka tetik'asa kaominaly kilasy faharoa, serivisy ho an'ny asa, sns.
Hijery misimisy kokoa Ny vokatray
Manana ny mari-pahaizana kilasy voalohany amin'ny famokarana vy any Sina.
Serivisy ho an'ny mpanjifa, fahafaham-po ny mpanjifa
Hetsika entin'ny orinasa
Trano fanatobiana vy
Ny trano fanatobiana vy dia matetika vita amin'ny andian-tsarimihetsika vy, ao anatin'izany ny tsanganana vy, ny tadin'ny vy, ny purlin sns. Ireo singa lehibe ireo dia mandrafitra ny firafitry ny entana ao amin'ny trano fanatobiana entana. Noho ny lanjany maivana sy amin'ny fanamboarana mora dia misy fangatahana lehibe ho an'ny trano fanatobiana vy. Ny strucutre vy ihany koa no ...
Taolana vy an'ny trano misy rihana maro ao She ... 2020-04-01
Ny taolana vy an'ny fananganana vy (No.7) ao amin'ny foibe Shenzhen Airlines-Guangdong Honghua Construction Co., Ltd, na Honghua, dia tompon'andraikitra amin'ny famokarana sy ny fametrahana azy. Misaotra an'i Shenzhen Airlines sy Hunan Construction indray. Trano misy rihana tokana no misy ...
mamaky bebe kokoa >>
Kitapo vy vita amin'ny vy amin'ny mpandeha an-tongotra mihoatra ny ... 2020-04-01
Tamin'ny volana lasa teo dia nanao tetik'asa tetezana vy avy amin'ny orinasam-panorenana ny orinasantsika. Taorian'ny tolona nandritra ny andro am-polony maro, vita tamin'ny fisondrotana ny girder vy vita amin'ny tetezana amin'ny arabe. Any Zhaoqing City, faritanin'i Guangdong no misy ny tetikasa. Ny halavan'ny mpandeha an-tongotra ...
Tabilaon'ny vavahady. Ny rindrin'ny vavahady dia rafitra ambany ambany, misy tsanganana sy tohotra mitsivalana na miorina ambony, mifamatotra amin'ny fanoherana fotoana fohy ...
Ny rafitry ny vy dia teknikan'ny fananganana miaraka amin'ny "vatan-kazo" amin'ny tsanganana vy mitsangana sy ny vatan-tsipika mitsivalana, namboarina tamina vilia mahitsizoro mankany ...
Satria manana tombony maro ny firafitry ny vy. Voalohany, tanjaka avo. Ny refy avo lenta amin'ny tanjaka amin'ny lanjany (ny tanjaka isaky ny lanja iray). Faharoa ...